Soo-saareyaasha Aaladaha Alxanka - Shirkadaha Alxanka Shiinaha & Warshad
Robot alxanka YASKAWA laser MOTOMAN-AR900
Qalabka shaqada yar robot alxanka laser MOTOMAN-AR900, 6-dhidibka taagan multi-wadajir ah nooca, xamuulka ugu badan ee la bixiyo 7Kg, dheereynta ugu sareysa ee jiifka ah 927mm, oo ku habboon golaha xakamaynta YRC1000, adeegsiga waxaa ka mid ah alxanka qaansada, farsamaynta leysarka, iyo maaraynta. Waxay leedahay xasillooni sare waxayna ku habboon tahay kuwa badan Noocan jawiga shaqada, kharash-ku-ool ah, waa xulashada koowaad ee shirkado badanMOTOMAN Yaskawa robot.
YASKAWA robot alxanka otomaatig ah AR1440
Robot alxanka otomaatig ah AR1440, oo leh saxnaan sare, xawaare sare, shaqeyn firidhsan, 24 saacadood oo hawlgal joogto ah, oo ku habboon alxanka birta, birta aan lahayn, xaashida galvanized, aluminium iyo waxyaabo kale, oo si ballaaran loogu isticmaalo qaybo kala duwan oo gawaarida ah, Biraha Qalabka, qalabka jirdhiska, mashiinnada injineernimada iyo mashaariic kale oo alxanka ah.
Yaskawa robot alxanka AR1730 waxaa loo isticmaalaa alxanka qaansada, farsamaynta laser, maaraynta, iwm, oo leh culeyska ugu badan ee 25Kg iyo ugu badnaan 1,730mm. Isticmaalkiisa waxaa ka mid ah alxanka qaansada, farsamaynta leysarka, iyo maaraynta.
Robotka Gacanta otomaatiga ah, 6 Axis Qabashada Robot, Qabashada Gacanta Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Aaladda otomaatiga ah ee Robot,